कोरोनाका कारण एकैदिन करिब ६ हजारको मृत्यु, ८२ हजार बढी संक्रमित (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण एकैदिन शुक्रबार करिब ६ हजारको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार मात्रै विश्वभर कोरोनाले ५ हजार ९ सय ७२ जनाको ज्यान लियो ।
शुक्रबार ८२ हजार ७ सय ४५ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस रौतहटमा थप दुई जनामा कोरोना भेटियो, संक्रमित संख्या ५४ पुग्यो
कोरोनाका कारण कुन देशमा कतिको मृत्यु भयो ? कति संक्रमित छन् ? सूचीसहित हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः